Markii Hore Eder Militao Haddana Alaba - Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday Dhaacyada Labadeeda Difaac Dhexe & Kulamada Ay Seegayaan - Laacib
Markii Hore Eder Militao Haddana Alaba – Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday Dhaacyada Labadeeda Difaac Dhexe & Kulamada Ay Seegayaan
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa hal maalin shaacisay in ay dhaawacmeen labadeeda difaac dhexe ee David Alaba iyo Eder Militao, kuwaas oo kusoo laabtay Spain iyagoo aan qayb ka noqon doonin kulamada Champions League ee toddobaadka soo socda iyo sidoo kale ciyaarta Barcelona ee El Clasico oo shaki la gelinayo.
David Alaba ayaa kusoo dhaawacmay kulamadii isreeb-reebka Koobka Adduunka ee xulka qarankiisa Austria, waxaana uu soo gaadhay Madrid maanta iyadoo ay dhakhaatiirtu markiiba xaqiijiyeen in aanu taam u noqon doonin ciyaarta Champions League ee Salaasada ay kooxdiisu u tegayso Shakhtar Donetsk.
Real Madrid ayaa sidoo kale sheegtay, in difaaca reer Brazil ee Eder Militao uu shalay yimid Madrid isagoo laga soo fasaxay kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka ee Latin America, isla markaana uu dhaawac muruqa ah qabto, waxaana loo badinayaa in aanu qayb ka noqon doonin ciyaarta Shakhtar Donetsk.
Real Madrid oo sidoo kale uu ka maqan yahay Dani Carvajal, waxa Carlo Ancelotti haysta culays weyn oo ah sida uu ku xallinayo dhibaatada kaga habsatay khadka difaaca.
Haddii Militao iyo Alaba ay maqnaadaan, waxa uu Ancelotti difaaca dhexe ka ciyaarsiin doonaa Nacho Fernandes iyo Jesus Vallejo halka Lucas Vazquez uu difaaca midig istaagi doono, laakiin booskii xilli ciyaareedka oo dhan ay ka maqnaayeen labadii difaac ee dabiiciga ahaa ee difaaca bidix ayay wali su’aali ka taagan tahay.
Marcelo iyo Ferland Mendy waxay kusoo laabteen tababarka, waxaana la sheegayaa inay taam yihiin, laakiin difaaca Faransiiska ah ee Mendy waxa ciyaar uu safto ugu dambaysay bishii March ee xilli ciyaareedkii hore ayay adag tahay in si toos ah loogu soo bilaabi karo, halka Marcelo uu laba daqiiqadood oo kaliya dheelay xilli ciyaareedkn socda.